Jaantus muujineysa isticmaalka hubka ee shacabka Mareykanka - BBC News Somali
Dhacdadii ugu xumayd ee dad badan lagu dilo ee Mareykanka ayaa markale soo celisay su'aasha la xiriirto haysashada hubka iyo in si adag loo xakameynayo.
Isbarbardhigga Mareykanka iyo dalalka kale ee caalamka?
Qiyaastii 40 boqolkiiba shacabka Mareykanka waxay sheegeen in ugu yaraan ay hal qori guriga ku haystaan, sida lagu xusay baaritaan la sameeyay sanadkan.
Dilalka ay fuliyaan dadka hubaysan, Mareykanka waa midka ugu sareeya qeybaha kale ee caalamka iyo dalalka horumaray.
in ka badan 11,000 oo qof oo gudaha Mareykanka ku suganaa ayaa hub lagu dilay, 2016-kii, taas oo noqoneysa seddax meelood-laba meel oo ka mid ah dhammaan dilalkii la geystay.
Yaa leh hubka dunida?
Inkastoo ay adag tahay in la ogaado tirada hubka shacabka gacanta ugu jiro ee caalamka, Hadana Mareykanka waxaa lagu qiyaasaa illaa 270 milyan oo qori.
Xukuumadda Juba oo lagu dhaliilay hub iibsi
Switzerland iyo Finland waa labada dal ee shacabkoodu ay haystaan hubka ugu badan ee qaaradda Yurub.
Qeybsan dilka uu hubka sababay ee Mareykanka
Waxaa jiro in ka badan 90 dhacdo oo dad badan lagu dilay oo ka dhacay Mareykanka tan iyo 1982-dii.
Laakiin tirada guud ee dadka lagu dilay taagashada ee sanadkasta, waxyar ayay ka noqoneysaa wadarta guud ee dilalka Mareykanka.
Waxaa laba jibbaar badan dadka isdilay, sida kuwa hubka isu adeegsaday ee 2015-kii, iyo dilal kale oo qaarkood hub loo adeegsaday.
Sida dhabta ah, dadka hubka isku dilay waa dhacdada ugu badan ee ay adeegsadaan kuwa aftooda goynaya ee Mareykanka, sida ay sheegtay laanta xakamaynta iyo ka hortagga cudurada, iyo hay'adda ka hortagga isdilidda ee Mareykanka.
Cilmi-baarid la sameeyay 2016-kii, waxaa lagu ogaaday in xiriir adag uu ka dhexeeyo haysashada hubka iyo dilka hubka loo adeegsado ee rag iyo dumarba.
Weerarkii Las Vegas
Weerarkii Las Vegas wuxuu ahaa midkii ugu xumaa ee dhowaanahan ka dhaca Mareykanka. Seddaxda dhacdo ee kalee ugu dhimashada badnaa waxay dheceen 10-kii sano ee la soo dhaafay gudahood.
Noocdayada hubka wax lagu dilo ee Mareykanka?
hubka militariga waa kuwa geysta weerarada sababa dhimashada ugu badan, sida midkii Orlando, iyo iskuulka Sandy Huuk ee Konektikat.
Booliska waxay sidoo kale sheegayaan in hub badan oo darandoori u dhaca laga helay qolka ninkii weeraray Las Vegas.
Dhowr gobol oo Mareykanka ah ayaa mamnuucay hubka wax gumaada, si adag ayayna u xakameeyaan, tan iyo 2004-tii.
Sikastaba, dadka dilalka geysta waxay isticmaalaan baskoolado, sida FBI-da ay sheegtay.
Waa imisa qiimaha hubka?
Dadka ku nool dalalka aan laga ogolayn in qof shacab ah uu hub haysto, waxay ku noqon kartaa layaab in ay ogaadaan in Mareykanka uu raqiis ka yahay ama qaali ka yahay.
Hubka fudud oo Paddock uu haystay, wuxuu qiimahooda gaari karaa ugu yaraan $200 dollar. Wuxuu ku qiimo yahay laptop-ka loo yaqaano Chromebook.
Hubka ayaa lagu iibiyaa suuqa caadiga ah iyo dukaamada.
Hubka darandooriga u dhaca ee dad badan dili kara, wuxuu ka mid yahay kuwa uu Paddock haystay, waxaana la iibiyaa illaa $1500 dollar.
Marka laga hadlo 23 qori iyo 19 biskoolad ee uu haystay, Paddock waxaa suuragal ah in uu bixiyay $70,000 oo dollar oo hubka iyo rasaasta ah.
Sidoo kale wuxuu iibsaday qalab qoryaha lagu xiro, iyo diiradda ama shiiska.
Yaa taageera in hubka la xakameeyo?
Fikirka dadka Mareykanka ee mamnuucidda hubka ayaa si aan caadi ahayn isu badalay, 60-kii sano ee la soo dhaafay.
Akhbaarta ku saabsan arrinta ma dhameystirno, laakiin waxay muujineysaa in taageerada ay isbedeshay, dadka badankoodana ay ka soo horjeedaan in la mamnuuco hubka fudud, sida ay sheegtay laanta Gallup.
sikastaba, dadka qaar ayaa taageeray xakameynta, taas oo salka ku haysa kala qeybsanaan siyaasadeed.
Waxaa jiro dad dalbanaya in la xakameeyo sida hubka looga iibiyo dadka qaba xanuunada dhimirka, ama kuwa baaritaanka uu ku socdo.
Madaxweyne Trump oo ka hadlayay dhacdadii ugu dambeysay wuxuu sheegay "in uu ka hadli doono shuruucda hubka waqtiyada soo socda". Markaa ka dib Aqalka Cad ayaa sheegay in xilligan aysan ahayn waqtiga laga doodayo xakameynta hubka.
Madaxweynihii hore, Barack Obama, ayaa ku dadaalay in uu helo shuruuc hubka lagu xakameeyo, balse way u suuragali waysay ka dib markii Jamhuuriyiinta ay diideen.
Yaa diidan xakameynta hubka?
Hay'ad lagu magacaabo NRA oo ka soo horjeeda in hubka oo dhan la xakameeyo ayaa ku dooday in qoryo badan ay nabad ka dhigayaan Mareykanka.
Laantaas qaran waxay ka mid tahay kuwa ugu sareeya ee u doodaya haysashada hubka, waxayna haystaa dhaqaale ay ku dhexgasho xubnaha Congress-ka marka ay timaado sharciga hubka.
Sida guud, mid ka mid ah shantii qof ee hub haysata wuxuu sheegaa in uu xubin ka yahay NRA - waxaa si wayn garab u siiya taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga ee hubeysan, sida ra'yi uruurin lagu ogaaday.
Ololaha NRA waxaa sida caadiga ah ku baxa $3 milyan oo dollar sanadkasta, si ay galaangal ugu yeelato shuruucda hubka.
Laanta NRA ayaa sidoo kale malaayiin dollar ku bixisa ololaha doorashada musharrixiinta ka soo horjeeda isbedel lagu sameeyo shuruucda hubka.
Qaramada Midoobay oo sheegtay in South Sudan lacago badan hub siisato
18 Maarso 2017